छाउपडी प्रथामा आधारीत चलचित्र ट्रेन्डिङ्गमा ( भिडियो ) « Niatra TV
काठमाण्डौं,असार ५ । नेपालको मध्ये तथा सुदुर पश्चिम को गाउँ तथा पहाडी भेग मा प्रचलित कुप्रथा मा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र टालो अहिले युट्युबमा चर्चामा रहेको छ ।
रिम विश्वकर्माको कथा, दीपक श्रेष्ठको पटकथा, निर्देशन र सम्पादनमा बनेको चलचित्र निहारिका फिल्मस प्रालिको ब्यानरले निर्माण गरेको हो ।
उक्त चलचित्र युट्युब च्यानल ओ एस आर बाट रिलिज भएको हो ।
रिम विश्वकर्मा ,अन्जली खड्का , प्रेम देव गिरि , सुशिला सिंजापती , सुशिला सिं , उदय बि के , गगन बि के एलिशा बादी , सम्झना बादी ! खगेन्द्र के पी , भुपेश सोनि , शेरबहादुर ,खगेन्द्र जैसी , जमुना बि क आदिले चलचित्रमा अभिनय गरेका छन ।
चलचित्रमा भएको दुइटा गितमा मेलिना राई ,शान्ती श्री परियार र रिषी खड्काको स्वर रहेको छ त्यस्तै रमेश बि जि र ऋषि खड्काको शब्द रचना रहेको छ ।
उत्तम रिमालको द्वन्द निर्देशन रहेको उक्त चलचित्रमा दुई ओटा द्वन्दको दृश्री समावेस गरिएको छ । खास गरि छाउपडी ( मासिक श्राव )को बेला चेली लाई ५ दिन सम्म घरमा बस्न नदिई गोठमा वा जङ्गलमा सानो गोठ बनाएर बस्न बाध्य गराईने अमानविय कुप्रथालाई उन्मुलन गर्न हेतु सहयोगी को काम गरोस भनेर यो फिल्म निर्माण गरिएको हो भन्ने कुरा कथाकार तथा निर्माता रिम विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
वर्षाको समयमा वास्तविक छाउगोठ मै गई एकदमै दुख गरि बनाईएको उक्त चलचित्र सम्पुर्ण नेपाली ले एक्पटक हेर्नै पर्ने निर्देशक दीपक श्रेष्ठको भनाई छ ! कथामा जिवन्त दिन सकियोस भनी स्थानिय कलाकारलाई नै समावेस गराईएको निर्माण पक्षको जनाएको छ ।